Buddhism-ka nolol maalmeedka - nooca Chan (Zen) Buddhism.
BUDDHISM EE NOLOSHA WALBA
Waa aqoon, waa Masterkey!
In ka badan 30 sano ka hor, waxaan aaday macbadka caanka ah ee Shaolin Temple ee Shiinaha, waxaan la noolaa daanyeerka muddo dheer, saaxiibo baan yeeshay, waxaan bartay Kung Fu waxaanan la xiriiray barashada Buddha. Markii abbotku ii xilsaaray inaan helo Shaolin Temple Germany, ruuxii macallinka weyn ayaa ii soo dhowaaday oo ii soo dhowaaday.
Buugga "Shaolin Rainer" waxaa curiyay adkaysiga qoraaga Karl Kronmüller. Wuu iga sii weynaaday haddii aanan rabin inaan siiyo wax 'wax' ah, wuxuu ku helay sheekadayda noloshayda mid xiiso leh. Waxaan ku dhahay 'maya', ayuu sii weydiistey, waqti ayaan u dhiibey. Maanta buugga waa la heli karaa waana ku faanayaa.
Boggan, khudbadaha iyo akhrinta ayaa ka soo baxay buugga.
Aniga aragtidayda, Buddhism ma ahan diin, waa falsafad iyo aragti adduunka. Buddha waligeed ma dareemin sidii Ilaah oo mana jiro aragtidayda adduunka. Laakiin waxaa jira xoogag adduunka jooga, kuwanuna waxay noo soo dhowaadaan macallimiinta waaweyn, oo si waadax ah u gaarsiin. Oo duniduna way arkeen dad badan, ha ahaadeen Ciise, Maxamed ama Buddha, Gandhi ama Bodhidharma. Dadkani waxay xidhiidh la leeyihiin caalamka, kaas oo ag-joogayaashu markaa kuxiran yihiin astaamaha rabbaaniga ah. Dhamaan macallimiinta waaweyn waxay lahaayeen aaminaad isku mid ah, oo leh habab kala duwan, laakiin isbarbar dhiga.
“Waa inaanad” noqon erey masiixi ah. Buddhism-ka, mabaadiidaani sidoo kale waa lafdhabarta waxbarista. Macallimiintii waaweyna weedhan wejiga hor dhigeen. Mar dambe ayay ahayd inay waraabin jireen "nebiyada beenta ah", mararka qaar xitaa dib ayey u noqdeen.
Buddhism-ka nolol maalmeedka
Buddhism-ka nolol maalmeedka macnaheedu waa in laga fikiro nolol maalmeedka.
Aniga, Rainer Deyhle, waxaan ahay Shaolin-ka Jarmalka ee ugu horreeyay oo aasaasay macbudka Jarmalka.
Waxaan sharraxaa nooca Chan (Zen) Buddhism qaab fudud oo la fahmi karo; Siyaabaha kala duwan ee loo adeegsado howl maalmeedka waa tusaale iyo fududaato in la fahmo.
Qof kastaa wuu la kulmi karaa "faa iidada" Chan Buddhism noloshiisa maalinlaha ah wuxuuna heli karaa caddeyn, jecleysiga nolosha iyo nabada gudaha.
Buuggayga cusub ayaa hadda ku jira bakhaarrada!
Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan asxaabteyda iyo kuwa i yaqaanay ee ila soosocday noloshayda oo ilaa maanta ila socday. Kuwani waa: Waalidkayga iyo gabadhayda, sayidkayga Shi Yan Zi, abbot Shi Yong Xin, Taema, Ta, Tian Tian & FHY, Georg, Rolf Liem, Carsten Ernst, Shi Heng Zong, Melena, Carsten Römer, Jan R., Bin, Heinz, Yannis, Lufti, Michail, Peter, Sven, Ümi, Tien Sy, Stefan Hammer, Andre Mewis, Billy, Traudi, Rainer Hackl, Hurz, Romano, Martin, Ashley, Dr. Waxyaabaha. Mahad gaar ah u gudub saaxiibkey Karl Kronmüller. Wuxuu had iyo jeer i xasuusiyaa in waqtiyada maanta sidoo kale ay u baahan yihiin sheeko wanaagsan.
Macbadka Abbot Shaolin Kaiserslautern
Madaxa Master ee Shaolin Temple Kaiserslautern
My sayid shi Yan Zi
Kulankii aan la yeeshay Yan Zi ayaa noloshayda waxbadan ka beddelay. Markii aan kula hadlay guriga keniisadda waqtigaas, ma aan garanaynin isbeddelada weyn ee daqiiqadani igu yeelan lahayd. Maanta Shi Yan Zi wuxuu hogaamiyaa Macbadka Shaolin ee England isagoo matalaya Abbot Shi Yong Xin. Shifu (Master) Shi Yan Zi, waa mid ka mid ah ardayda abbot-ka ee dugsiga sare isla markaana ah hoggaamiye sare oo GongFu ah oo ka mid ah daanyeeradii Shaolin ee 34-aad. Shi Yan Zi wuxuu wax ku soo bartay Kuliyada Fanka ee Shaolin sanadkii 1983 wuxuuna noqday arday toos ah Abbot Shi Yong Xin sanadkii 1987.
Ku socota macbudka Boqortooyada Midowday
Ka fogaanshaha xumaanta oo dhan, abuurista wanaagga oo dhan, nadiifinta dareenka. Kani waa dharka joogtada ah ee Buda.
Marka Buddhismku wuxuu ina barayaa mas'uuliyadda, waxay ina tuseysaa inaan si buuxda mas'uul uga nahay waxaan qabsaneyno iyo waxaan qabaneyno, oo aan cidna ku eedeyn karin waxaas; taas oo ah inaan ku guuleysano waxkasta awoodeena iyo dadaalkeena. Buddha ayaa ina tusaysa wado, laakiin waa inaan annaga qudheena u dhaqaaqnaa.
DUGSIYADA LAGU SAMEEYAY EE DUGSIGA
WAA INAAN ahay?
Ma xukumi karo haddii sheekadaydu xiiso kuu leedahay.
Waan noolahay oo waan jiray, waan aqbalay caqabadaha, quus, laakiin had iyo goorba cagahayga ayaan ku dhibtooday Ku celcelin suurtagal ma ahan. Ma doonayo inaan qariyo xaqiiqda ah in kibir cayiman ayaa i qabata. Laga yaabee inaad sidoo kale halkan ku dareemi karto waxyaabo wanaagsan oo aad fikradahaaga ku soo qaadatid.
Xuquuqda daabacaadda © 2019 Shaolin Rainer - Waxaa naqshadeeyay ❤ dad waa weyn. qorid | Privacy | Kontakt
Websaydhkan ayaa adeegsanaya cookies si loo hagaajiyo khibradaada. Waxaan u qaadaneynaa inaad ogolaatay, laakiin waad iska bixin kartaa rukhsad haddii aad rabto. Dejinta cookieACCEPT
loo baahan yahay had iyo jeer firfircoon